Horudhac: Liverpool vs Sheffield United… (Reds oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kulanka caawa ka dhacaya Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 24 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield caawa ku soo dhoweynaysa naadiga Sheffield United.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ee Reds ayaa doonaysa inay garoonkeeda ku garaacdo caawa Sheffield United oo ay soo dhoweynayso isla markaana ay dib ugu soo laabato wadada guusha.
Tababare Jurgen Klopp kooxda uu hoggaamiyo ayaa barbaro 2-2 la gashay Everton kulankoodii ugu dambeeyey horyaalka kaasoo ahaa Merseyside derby todobaadkii la soo dhaafay, laakiin waxaa si weyn loogu badinayaa inay garaaci doonto kooxda Sheffield United oo ilaa iyo hadda heshay hal dhibic oo qura.
Fabinho ayaa u muuqda mid sii wadi doona inuu buuxiyo booska daafaca Liverpool ee uu ka maqan yahay Virgil van Dijk kaddib bandhiggii ilqabadka lahaa ee uu sameeyey kulankii ay guusha ka gaareen Ajax ee Champions League.
Wali ma jiro waqti cayiman oo uu dhaawaca jilibka ah ku maqnaan karo Van Dijk, halka Joel Matip iyo Thiago Alcantara la qiimeyn doono xaaladdooda.
Rhian Brewster ayaa heli kara ku bilaabashadiisii ugu horreysay safka hore ee Premier League kulanka ay caawa garoonka Anfield ku soo dhoweynayaan Sheffield United.
John Fleck iyo Lys Mousset ayaa labaduba dhaawac kaga maqnaan kara garoommada in lagu qiyaasayo lix todobaad.
Macallin Chris Wilder ayaan heli doonin adeegga daafaciisa Jack O’Connell, halka Max Lowe kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League la soo gaabiyey Axaddii la soo dhaafay kaddib markii uu ku dhacay jahwareer.
>- Liverpool ayaa guuleysatay saddex kulan Premier League oo xiriir ah oo ay wajaheen Sheffield United, iyadoo xitaa aan gool laga dhalin.
>- Sheffield United ayaa guuldarro la kulantay 19 ka mid ah 23-kii kulan ee la soo dhaafay oo ay booqdeen Reds tan iyo guushii 2-1 oo ay ka gaareen bishii April sanadkii 1994-kii, waxaana afarta kulan ee kale ay ka haystaan 3 guul iyo 1 barbaro.
>- Liverpool ayaa u socota inay saddex kulan oo xiriir ah Premier League oo guul la’aan ah markii ugu horreysay tan iyo bishii May ee sanadkii 2018-kii.
>- Mo Salah ayaa dhaliyey goolkisii 100-aad ee Liverpool tartammada oo dhan, waxaana ay ku qaadatay 159 kulan, isagu waa ciyaaryahanka saddexaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaaray goolashaas oo Liverpool ah, waxaana uu ka dambeeyaa Roger Hunt oo ay ku qaadatay 144 kulan iyo Jack Parkinson (153).
>- Salah iyo Sadio Mane ayaa dhaliyey 10 oo ka mid ah 13 gool oo Premier League ay ka dhalisay kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan.
>- Roberto Firmino ayaa dhaliyey kaliya hal gool 57-kiisii isku day oo uu ku sameeyey garoonka Anfield.